Masteron Propionate ama Masteron Enanthate? Midkee ayaa kuu fiican?
waa maxay Masteron Propionate (Drostanolone Propionate)?
Masteron Propionate (521-12-0) iyo Masteron Enanthate (472-61-1) waa kala duwanaanshaha Masteron leh farqi yar. Waxay labaduba yihiin kuwo laysku duro waxayna ku badan yihiin kuwa jidhka sameeya. Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya labada ayaa ah dawada qiyaasta iyo noloshooda nuskood. Qalabka Masteron Propionate ayaa yar yar laakiin la siiyaa maalin kasta tan iyo markii daroogadu si dhakhso ah u shaqeyso isla markaana jirka u nadiifiso muddo gaaban. Masteron Enanthate qiyaasta, dhanka kale, waxaa la siiyaa hal mar ama laba jeer toddobaadkii, laakiin qadaro badan marka laga shaqeeyo hoos udhaca laakiin jirka ayaa si dhakhso ah u nadiifiya.
Masteron propionate budada ama daroogada si sahlan ayaa loo heli karaa suuqa, Contrary to Masteran enanthate kuwaas oo helitaanka aan la saadaalin karin. Guud ahaan, isku midka udhexeeya labada labbo ee steroids waxay ka badan yihiin kala duwanaanta. Dhibco aad u yar ayaa la soo ururin karaa Masteron wuxuu uqalmaa nuxur ahaan.
Sidee falaa Masteron Propionate shaqeeya?
Masteron propionate (521-12-0), oo loo yaqaan 'Drostanolone propionate' waa qaabka asalka ah ee Masterone sidaas oo la barbardhigo Magaca Macalinka Masteron, waxa uu ku guulaystaa marka la eego sumcadda. Inta badan dadka isticmaala steroid waxay aqoonsadaan Masteron sida magaca caanka ah ee Masteron propionate.
Steroidkani wuxuu bixiyaa sifooyin daaweyn ah oo ka soo horjeeda oolojiin iyo anabolic. Isbarbar dhigida steroid anabolic dadka kale ee suuqa, waxaa loo sheegi karaa sida dhexdhexaad ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay xoojisaa awoodda aad u leedahay inaad dhisato muruqyo badan. Ka hor tartanka, Masteron propionate wuxuu kaa caawinayaa inaad iska daadiso dufanka jidhka oo ka hortagaya sii-daynta biyaha marka aad xirantay muruqyada caatada ah.
Masteron propionate waa mid ka mid ah steroids ee ugu horeysay ee la ogaado oo la soo saaray markii ugu horeysay ee 1959. Iyadoo ay weheliyaan steroids kale sida anabolic Superdrol iyo Anadrol, Masteron propionate waxaa soo saaray shaybaar kiimiko ah oo loo yaqaano Syntex.
Si loo yareeyo kharashka cilmi-baarista, Syntex wuxuu la shaqeeyay shaybaarro kale oo heshiis la leh iibinta natiijooyinka cilmi-baarista iyo natiijooyinka cilmi-baarista oo lala kaashanayo hay'ada lammaanaha. Shaybaarada Lily waxay fursad u heleen inay iibiyaan dhismaha iyaga oo isticmaalaya Drolban oo ah magaca caanka ah ee Maraykanka. Dhinaca kale, macquul ma noqon karo suuq caalami ah oo hoos yimaada magaca Masteron.
Muddo yar gudaheeda, Masteron propionate wuxuu caan ku noqday Portugal, Belgium, Germany, Ingiriiska, Japan, iyo Spain. Waxa kale oo caan ku ahayd gobolka United. 1960, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka ayaa u oggolaaday isticmaalka steroid ujeedooyin caafimaad ka dib markii caankiisuna kor u kacay.
Dumarka ka shaqeynaya kansarka naasaha oo sareeya ayaa ahaa kuwa ugu horreeya ee isticmaala qiyaasta Masteron ee daaweynta. intooda badan haweenka isticmaala daroogada ayaa ahaa postmenopausal. Guusha daroogada ee Maraykanka ayaa ka dhigtay in adduunka oo dhan loo yaqaan. ka duwan qiyaasta testosterone, taas oo horey loo isticmaalay, fuuq-baxa waa mid aad u yar marka la isticmaalayo qiyaasta isku midka ah Masteron. Bukaannada iyo dhakhtarka dumarka ayaa lagu wargeliyay farqiga u dhaxeeya siday u isticmaalaan Masteron.
Haweenka maamula qiyaasta 300mg ama toddobaadkii badnaad waxay la kulmeen waxyeelooyin sida kiniinada ballaarinta, koritaanka timaha, wajiga iyo dhawaaqa. Si loola dagaallamo saameentan dhinaca bukaanku, bukaanku waxay yareeyaan qiyaasta laakiin weli waxay ku raaxeeyeen faa'idooyinka badan Masteron.
Noocyada jidhka iyo cayaartoyda lagama tagin, sidaas oo kale 1980s. Waxay isticmaaleen dhammaan waxyaabihii wanaagsanaa ee Masteron propionate ay bixin karaan si ay u soo saaraan murqaha caatada ah. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii ciyaartoy badani ay bilaabeen in ay isticmaalaan goobaha madadaalada, dawladda Mareykanka ayaa ku niyad-jabtay isticmaalka. tiro badan oo soo saarayaasha Masteron ah ayaa joojiyay soo saarista iyo iibinta ikhtiyaari ahaan. Dhamaadka dhammaadka 1980s, soosaarka daroogada ayaa hoos u dhacay. Shaybaarrada kali ah ee soo saara steroid ee dalalka reer galbeedka waxay ku yaalaan Belgium. Wax soo saarka Masteron ayaa gebi ahaanba la qabsaday '90s ka dib markii la xidhay shaybaaradii haray.
Inkasta oo aysan jirin wax sharci ah oo caqabad ku ah wax soo saarka iyo iibinta Masteron ujeedooyin caafimaad oo ku sugan Mareykanka, farmashiyayaashu uma badna inay dib u bilaabaan wax soo saarkooda waqti kasta. Laga yaabe sababaha astaamaha kiimikada.
Masteron propionate waa fududahay DHT oo kaliya in waxoogaa wax laga beddelo. Koox methyl ayaa lagu darayaa Kontorolka 2 ee qaabka qaab dhismeedka DHT. Isbedelkan yar yar wuxuu xoojiyaa awoodda anabolic ee Masteron iyada oo hagaajineysa adkeysigeeda metabolism. Marka la maamulo, Walaxyada anabolic Master ayaa qaadanaya muddo dheer si ay u metabolize markaa si kor loogu qaado steroids kala bar nolosha. Dheef-shiid kiimikaadka degdega ah ayaa badanaa ku jira unugyada muruqyada qalfoofka markaa waa la iska ilaaliyaa. Tilmaamaha ugu Habboon ee Methyltestosterone loogu talagalay Jimicsiga
On a 17beta hydroxyl group, a ester carboxylic acid ester ayaa lagu darayaa si loo beddelo steroid. Nooc steroid ah ayaa leh sifooyin yar, sidaas awgeed si tartiib ah ayey u neefsadaan jidhka marka loo eego steroids oo bilaash ah. Sidaa awgeed isbeddelka ayaa sidoo kale sii wanaajinaya nolosha nuska ah ee Masteron propionate. Sidaas daraadeed qashin-qaadayaashu waxay leeyihiin waqti ku filan oo ay iskaga soocaan xeryahooda Masteron si ay ugu oggolaadaan inay si xor ah ugaga dhaqaajiyaan oo ay si dhaqso ah u dhaqmaan jirka oo dhan. Isticmaalayaasha looma baahna inay isku darsadaan Masteron propionate waqtiyo badan kahor tan iyo inta qiyaasta daawadu socon karto muddo ka badan laba maalmood jirka.
Qiyaasta Masteron propionate ee ragga ragga waa qiyaastii 300mg ilaa toddobaadkii 400mg. Sida saxda ah, duritaanka 100mg waa in la siiyaa maalin kasta lix, toddoba ama sideed maalmood. Dumarku waa in ay isticmaalaan qadar yar oo daroogada ah si looga fogaado fuuq-baxa; qiyaastii 50mg. Dumarka isticmaalaya 100mg ama wiiggii wiigga waxay caadi ahaan dareemaan qaadsiin.
Daawadani maahan sababo kor u kaca muruqyada. Sababtan awgeed, dadka isticmaala badan waxay tixgeliyaan steroid daciif ah. Ciyaartoyda kale waxay daaweeyaan daroogada si aan haboonayn sidaas darteed kuma raaxeysan faa'iidooyinka. Iyada oo leh tiro dufan jirka ah oo ka badan shan iyo labaatan boqolkiiba, lagama yaabo inaad aragto isbeddel muuqaal ah ka dib markaad isticmaasho steroid. Marka la eego, dadka isticmaala waa inay lumiyaan dufanka jirka ka hor inta aan la isku darin qiyaasta.
Masteron propionate wareegyada
Wareegga Masteron ee bilowga
Wixii bilawga ah, wareegga waa inuu ahaado qiyaastii 12 qiyaasta qiyaasta toddobaad ee 300mg ilaa 500mg of testosterone enanthate iyo 400mg of Enanthate. Qaybtaani, kala duwanaanshaha ugu weyn ee Masteron ayaa la doorbidi karaa tanoo si fiican u shaqeyneysa istiraatiijiga testosterone. Sidoo kale, marka la isticmaalayo miyirka loo yaqaan 'Masteron enanthate', waxaa la yareeyaa duritaan yar. Isticmaalayaasha ayaa dooran kara qiyaasta testosterone ee ay doorbidaan noocyada kala duwan ee 300mg ilaa 500mg. Doorashadu waxay ku saleysan tahay waayo-aragnimadooda ay la leeyihiin testosterone ama faa'iidooyinka ay rabaan inay ka helaan xarunta. Ujeedada ugu weyn ee wareeggan waa in lagu baro Masteron nidaamka iyo saameynta. Masteron wuxuu leeyahay saameynta aromatizing sidaas darteed uma baahna in lagu soo bandhigo aromatase kale ee la xariira si liddi waxyeello aromatic ee testosterone. Si kastaba ha noqotee, waa in ay cadeeyaan in Masteron uusan soo bandhigin saameynta adag ee aromatase inhibitor ah marka la barbar dhigo kuwa ka hortagga kale sida Letrozole, Aromasin, Iyo Arimidex. Haddii ay dhacdo in xayndaabku ka kooban yahay xayndaabyo badan oo aromatic ah, ka dibna isticmaaluhu waa inuu tixgeliyaa soo bandhigida kale oo adag oo ka hortag ah qiyaasta. Ginecomastia waxay caan ku ahayd dadka isticmaala Masteron ee leh xeryahooda aromatic sida Testosterone iyo Dianabol.
Masteron propionate Intermediate propionate
Tani waa wareega toddobaad ee 10. Shuruudaha qiyaasta waxaa ka mid ah 100mg testosterone propionate todobaadkiiba (ama 25mg maalintiiba) iyo 400mg Masteron propionate toddobaadkiiba (waxaa la siin karaa qiyaasaha 100mg maalin kasta). Usbuuca hal ilaa usbuuc siddeed, isticmaaluhu waa inuu sidoo kale maamulaa 50mg mg 70 mg Anavar maalin kasta.
Dhaqdhaqaaq dhexdhexaad ah waxaa loogu talagalay goynta iyo adkaanta jirka iyo waqti isku mid ah luminta dufanka ama faa'iidada caanaha. Tani waa in ay raacdaa faa'iidada dufan ee ugu yar yar iyo haynta biyo la'aaneed inta uu qofku isticmaalo cunnooyin taasoo keenaysa helitaanka himilooyinkaas. Testosterone waxaa lagu daraa xargaha si loo hubiyo in qiyaasta loo baahan yahay ee testosterone looga baahan yahay nidaamka ayaa la heli karaa tan iyo markii la soo saaro tijaabada dabiiciga ah waxaa lagu xakameynayaa isticmaalka steroids anabolic. Sababahan awgeed, isticmaaluhu waa inuu maraa tijaabada Tijaabada Beddelidda Tijaabada oo leh qiyaasta boqol millatariga todobaadkii. Xaaladdan, ficilada saxda ah ee caadiga ah ee ay keento testosterone ayaan saameyn. Iyada oo qiyaasta qiyaasta testosterone hoose, fursada aromatisku waa mid aad u yar sidaa darteed uma baahnid oo ay ku jiraan aromatase inhibitor ah xargaha. Awoodaha xayawaanka arooska ee Masteron ayaa ku filan wareegga. Anavar iyo Masteron waa xeryaha ugu muhiimsan ee ka caawin kara helitaanka cufnaanta caanaha iyo luminta dufanka iyada oo aan haysanin biyaha ama dufanka.
Masteron propionate Advanced
Waqtiga wareeggu waa toddobaadyo XNUM leh qiyaasta 10mg Masteron propionate toddobaadkiiba, 400mg testosterone propionate toddobaadkii iyo 100mg trenbolone asbuucii. Socodkan wuxuu awood u leeyahay oo loogu talagalay kuwa jir-dhis khibrad iyo xirfad leh. Waxay adkeyneysaa jirku inta lagu jiro marxaladda goynta ama marka la diyaarinayo tartanka. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale ku guuleysta awoodda anabolic ee dheeraadka ah ee buuxa iyo kuwa isku dhafan. Ilaa inta qofku isticmaalo cuntooyinka loogu talagalay in lagu gaaro himilooyin isku mid ah oo uu tababar adag yahay, isku-darka trenbolone, Masteron, iyo testosterone waxay ku siin doonaan isbeddel la ogaan karo oo ku dhaca jirka. Ka sokow aad u xoog badan, Trenbolone ma badasho Estrogen. Isku-dhafka Masteron, qof kasta oo isticmaala waa inuu si sahlan u helaa jir tartan leh isagoo caawinaya cunto wanaagsan iyo tababar ku filan.
User Duration qiyaasta Saameyn
Bilowga 6 toddobaad 50mg-100mg Masteron ayaa maalin kasta u diyaarsan
30mg-40mg methandrostenolone maalin walba
· Waxqabadka awoodda korodhsan.
· Miisaanka yaraanta yar
Cayaaraha hiwaayadda 6-8 toddobaad 100mg Masteron propionate
40mg Turinabol maalin walba
Testosterone 100mg ayaa maalin kasta soo jiidata Tilmaamayaal awood leh
· Cufan murqaha
Ciyaartoy qibrad iyo xirfad leh 10 toddobaad 1-8 usbuucyo; 300mg Masteron propionate toddobaadle ah oo dheeraad ah iyo testosterone 500mg enanthate toddobaadle ah
9-10 toddobaadyo; 50mg Masteron maalin kasta oo la socdo 100mg Testosterone propionate maalin kasta · Cufnaanta jirka ee hoos u dhacda
· Xanuun ku noqo
Qiyaasta Masteron propionate qiyaasta ayaa daciif ah mana siinayo natiijooyinka la rabo. Si kor loogu qaado awoodeeda, waxaa lagula talinayaa in lagu daro steroids kale iyo anogenikada; Oxandrolone iyo Winstrol waa doorasho fiican. Kordhinta qiyaasta qiyaasta mecnaheedu macnaheedu maahan in natiijooyinka wanaagsani ay muujinayaan halkii ay saameyn xun ku yeelan lahayd saameyn xun. Si aad u dhisto murqo caan ah, xayeysiis ah Masteron propionate iyo testosterone waa mid wax ku ool ah. Sidoo kale, waxaad isku dhafan kartaa steroid trenbolone iyo boldenone. Ciyaaraha iyo jir-dhisayaasha kuwaas oo ujeedadoodu tahay inay kor u qaadaan xoogga halkii ay ka dhisi lahaayeen muruqyada inta lagu jiro goynta wareegyada waxay ka faa'iideysan doonaan wax kasta oo wax walba u baahda Masteron propionate.
Masteron propionate saameyn iyo natiijooyinka
Masteron propionate jarista
Sida hore loo soo sheegay, saamaynta Masteron propionate ayaa si fiican loo soo bandhigaa inta lagu jiro jarista wareegyada. Sidoo kale, dadka isticmaala waa inay lahaadaan boqolkiiba dufanka jirka ee aad u hooseeya. Tani waa sababta ugu weyn ee loo isticmaalo qiyaasta qiyaasta daaweynta jimicsiga jirka; Xilligan, badiba shaqsiyaadka ayaa lumi doona dufan xad-dhaaf ah. Masteron propionate wuxuu ka takhalusi doonaa dufanka haraaga ah ee dillaaca dhamaadka wareegga. Saamaynta antiestrogenic ee Masteron propionate waxay hubisaa in muuqaalka muuqaalku uu ku adkaado oo isbedel guud iyo isbedel guud. Saameyntu si kastaba ha ahaatee looma ogola shakhsiyaadka leh wax ka badan 10 dufanka jirka. Nasiib wanaag, kuwa ku tiirsan ee ku filan lama ceeboobi doono, waxay arki doonaan qallajiye iyo muuqaal ka sii adag. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Cycle, Natiijooyinka, Faa'iidooyinka, Qiyaasta
Cayaaraha oo raacaya cunto bilaash ah oo lacag la'aan ah si loo yareeyo miisaanka ayaa ka faa'iideysan doona qiyaasta hormoonka Masteron. Xirfadlaha ayaa xoog ku heli doona inta uu isku dayayo in uu gaaro miisaanka jirka ee ku habboon raadsigiisa. Sidoo kale, isticmaaluhu wuxuu ku guuleysan doonaa dulqaadka murqaha iyo dib u soo kabashada iyada oo aan ku jirin miisaanka dheeraadka ah.
Masteron dacaayad baaxad weyn
Masteron propionate waa xoogaa daciif ah wareegyada qulqulka. Sida Primobolan Depot, Masteron ayaa laga yaabaa inay ka caawiso isticmaalaha inuu ku yeesho tiro yar, inkasta oo aan wax badan ku filneyn haddii qiyaasta daawada loo qoondeeyey. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada qiyaasta ah ee la ogaan karo iyo la ogaan karo waa mid aan suurtagal ahayn noocyada kale ee steroids oo ku haboon wareegga cirbadaha. Qaar ka mid ah jir-dhiseyaasha ayaa laga yaabaa inay doortaan inay ku daraan steroidkan qorshaha boodhka ah ee lafa-beelka iyo hantida anti-estrogenic. Marka xilli ciyaareedka ka baxo, steroid waxay hubisaa in jirka uusan kaydin dufanka xad-dhaafka ah, laakiin ma aha inay tahay sababta kaliya ee loo adeegsan karo wajiga. Taa baddalkeeda, maareynta jidhka jirka waa in ay noqotaa mid aan suuragal ahayn iyada oo aan loo Wareegga xilli-ciyaareedka waxaa lagu gartaa heerar sare oo waxqabadyo aromatase ah oo ay sababtay qiyaasta testosterone. Isku daridda xeryaha Trenbolone ama Nandrolone waxay keenaysaa koror dheeraad ah oo ku saabsan waxqabadka progesterone. Sidoo kale, Dianabol ama Anadrol waxay xawaareysaa hawlaha estrogenic. Nasiib darro, oo leh astaamaha anti-estrogenic, Masteron ma awoodo inuu la dagaallamo heerarka dhaqdhaqaaqa dheeraadka ah ee estrogenic.
Masteron propionate waxyeellooyinka
Marka loo barbardhigo steroids kale, Walbaha saameynta daaweynta Masteron maaha mid aad u xun oo si fudud loo xakamayn karo. Isticmaalayaasha intooda badan, gaar ahaan ragga waxay si fudud u dulqaadan karaan. Dumarka, calaamadaha virilization waxay noqon karaan dhibaato laakiin qiyaasta saxda ah ee qiyaasaha, waa la xakameyn karaa. Ka doodista hoosta ayaa ah saameynta ay leedahay saameynta daaweynta Masteron.
Dhibaatooyinka 'Androgenic' ayaa aad ugu badan isticmaalaha isticmaalayaasha Masteron. Waxay ka mid yihiin kordhinta timaha dheeraadka ah, finanku waxayna degdeg u qaadaan timaha luminta shakhsiyaadka ragga ah ee loo maleynayo inay xiirto. Nasiib wanaag, Inkastoo ay noqotey inay tahay DHT derajo heerarkiisa dhaqdhaqaaqa isdheeraadka waa mid dhexdhexaad ah. Heerarka waxtarka daaweyntan, si kastaba ha ahaatee, waxay si aad ah ugu tiirsan yihiin shakhsiyaadka. Tusaale ahaan, Masteron wuxuu kicin karaa xajmiga badan ee ragga xasaasiga ah marka loo eego kuwa kale ee anabolic anabolic.
5-alpha-reductase enzyme, enzymes oo badalaysa testosterone si dihidototestosterone, ma metaba halis hormoonka propionate Masteron. Tani waa sababta oo ah Masteron waa wax yar oo wax laga beddelay DHT si loo yareeyo habka yareynta ni. Sida iska cad, iyada oo aan la yareeyn, metabolismka ma dhacdo, sidaas darteed, waxba looma hortago. 5-alpha-reductase inhibitor sida Finasteride ayaa saameyn ku yeelan doonta Masteron.
Noocyada xuubka ah ee Masteron ayaa sababi kara in dumarku ku dhacaan cudurka. Calaamadaha waxaa ka mid ah codka qoto dheer, ballaarinta kintirka, koritaanka timaha kor u kaca. Dhibaatooyinkaan waxaa ka mid ah bukaanka kansarka naasaha oo isticmaala qiyaaso badan oo Masteron ah. Waa suurtagal in la iska ilaaliyo astaamahan marka la isticmaalayo qiyaaso hoose laakiin waxtar leh. Masteron propionate waa dherer gaaban sidaas darteed iska cad jirka oo ka dhaqsaha badan esterthate Long esters. Dumarka raba inay isticmaalaan noocyada Masteron waxaa lagu dhiirigelinayaa inay isticmaalaan propionate Masteron. Haddii calaamaduhu si dhakhso ah u kobcaan, isticmaaluhu waa inuu joojiyaa qiyaasta isla markiiba, ka dib marka la filayo in la baabi'iyo ugu dhakhsaha badan. Haddii la iska indho tiray, waxay noqon karaan kuwo aan dib u dhicin.
Dhibaatooyinka 'Estrogenic' ma muujiyaan marka loo isticmaalo Masteron. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Masteron uusan haysan wax astaamo ah progestin ma aromatize. Xaaladdan oo kale, haynta biyaha iyo ginecomastia ma noqon doonto mid dhibaato ah. Isticmaalayaasha sidoo kale ma dareemayaan cadaadis dhiig oo sarreeya oo ay keeneen biyo aan loo baahneyn. Iskuduwaha, Masteron ayaa laga yaabaa inuu muujiyo saameynta anti-estrogenic sidaa daraadeed antiestrogen maahan daruuri. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa in loo baahdo oo sidaas awgeed waxaa ku jira qaybo gaar ah.
Saamaynta Masteron ee heerarka kolesteroolka looma diidi karo. Heerarka dhiigga LDL wuu sii kordhayaa, halka heerarka HDL-da ee kor u kaca. Isbedelka kolesteroolka maaha mid cabsi badan marka la isticmaalayo Masteron marka loo eego marka la isticmaalayo steroids kale sida C17-alpha alkylated. Laakiin saameyntu way ka xoog badan tahay marka la barbar dhigo hormoonada testosterone iyo xeryaha Nandrolone. Qiyaas ahaan, Masteron waxaa laga yaabaa inuu saameyn aad u yar ku yeesho cadaadiska dhiigga, oo dadka intooda badan iska indho tiri karaan.
Maareynta kolestaroolka waa in si weyn loo tixgeliyaa marka la isticmaalayo Masteron propionate si looga fogaado waxyeelooyinka la xiriira kolestaroolka. Haddii ay dhibaato kaa haysato maaraynta kolestaroolka jirka ama heerarka kolesteroolka waa mid aad u sarreeya, iska ilaalinta steroid-ka guud ahaan waxaa lagula talinayaa. haddii heerarka kolestaroolku uu hooseeyo, isticmaaluhu waa inuu ilaaliyaa qaab nololeed caafimaad leh. Cunto cunto caafimaad leh oo ay ku jiraan sonkor fudud, cuntooyin leh dufan aan fiicnayn, iyo waxyaabo badan oo ka mid ah acids-ka dufanku waxay samayn doontaa caddaalad.
Si ka duwan noocyada noocyada kale ee steroids, Masteron propionate ma laha astaamaha anabolic anatolic androgenic. Sidaa darteed ma waxyeelo ama sababto beerka waxyeello kasta.
Daaweynta testosterone oo ka baxsan waa qasab inuu u isticmaalo isticmaaleyaasha Masteron propionate. Steroidkani wuxuu xakameynayaa wax soo saarka tijaabada dabiiciga ah. Marka uu isticmaaluhu ku fashilmo inuu qaato daaweynta, wuxuu sameyn doonaa xaalad tijaabo ah oo hooseeya. Marka laga reebo caafimaad darro, xaaladdan ayaa soo jiidata calaamado kale.
Jimicsiga iyo ciyaartoyda waxay isticmaalaan Masteron inta lagu jiro jarista wareegyada. Waxay ka hortagaan xaddi badan oo testosterone ah oo ay ka mid yihiin waxqabadka estrogenka ee sareeya. Xaaladdan, qadar yar oo ku saabsan 100mg ilaa 200mg ee testosterone toddobaadkiiba waxay ku filnaan doontaa inay bixiyaan testosterone loo baahan yahay iyo xakamaynta dagaal.
Marka laga saaro Masteron iyo dhammaan hormoonada steroidal jirka laga saaro jirkaaga, qiyaasta loo baahan yahay ee testosterone dabiiciga ah ayaa la soo saarayaa. Dib u soo kabashada lama qaban doono isla markiiba; waxay qaadataa dhowr bilood. Dib u soo kabashada dib u soo kabashada waxay ku baaqeysaa post Post Cycle Therapy. Waxay kor u qaadaysaa soo saaridda testosterone, ilaa heerka wax soo saarka asalka ah. Guud ahaan, daaweynta wareega dambe waxay yareysaa wakhtiga soo kabashada waxayna ujirtaa tijaabinta yaraanta testosterone marka nidaamku u habaynayo waxsoosaarka caadiga ah ee testosterone. Dib-u-soo-kabashada ayaa ka dhacda iyada oo la maleynayo in Hypothalamic-Pituitary-Testicular-Axis aan la waxyeeloobin oo isticmaaluhu uusan diiwaan gashanayn xaalad tijaabo ah oo hooseeya.
Helitaanka macaamiisha Masteron
Sida hore loo soo sheegey, soosaarka Masteron propionate ayaa si weyn hoos u dhacay iyo hadda oo kaliya shaybaarrada dhulka hoostiisa soo saara. inta badan dadka sheeganaya in ay leeyihiin asalka Syntex Masteron oo kaliya ayaa leh alaab been abuur ah ma jiro shirkad soo saarta Masteron propionate budada ama qaab kale. gudaha Maraykanka. ee suuqa caalamka, steroidkani waa mid aad u yar. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga helaa tiro badan oo suuq madow ah. Alpha Pharma waxay soo saartaa nooca Mastabolin kaas oo si fudud loo heli karo suuqyo badan iyo sahayda sare. Shaybaarada guud iyo shaybaarrada dhulka hoostiisa ah sida Biomex, Geneza, iyo shaybaarada QD-du waxay bixiyaan sheygan tiro badan. Ka hor intaadan ka soo iibsanin shaybaarka dhulka hoostiisa, waa muhiim in la sameeyo jeegareynta asalka ah ka hor inta aan la gelin amar kasta. kharashka dhismaha anabolic waa in uu ka hooseeyaa iyada oo aan loo eegin alaab-qeybiyaha. Waagii hore, Masteron wuxuu ka mid ahaa steroids ugu qaalisan suuqa; hadda, waa jeebka-saaxiibtinimo.
Soo iibso Masteron propionate online
Dalbashada Masteron propionate online waa habka ugu sahlan uguna jaban ee lagu iibsado. Waxaa jira steroids badan oo anabolic ah oo la heli karo online laakiin nasiib daro, lama soo saaro si isku mid ah. Fursadaha ah in la soo gudboonaato daawo been abuur ah, faddaraysan ama hoos udhac ah oo loo yaqaan anabolic steroids ayaa aad u sarreeya. Waxaad ku dhammaynaysaa lacag aad u badan oo ku saabsan alaab been abuur ah. Si aad uga fogaato feejignaantaas, digtoonow oo wax badan ka ogow alaab-qeybiyehaaga. Maqnaansho kasta oo ka baxsan waxaa jira qiimo lacageed. Waxaa jira muuqaal bixiyeyaasha dhabta ah ee online ah oo iibiya Masteron tayo leh, laakiin badiba iibiyayaashu waa alaab-qeybiyeyaasha hoose-hooseeya.
Marka aad iibsaneysid Masteron online, waa inaad sidoo kale tixgelisaa sharciyadeeda. Tusaale ahaan, gudaha Maraykanka, Masteron propionate, oo ka mid ah steroids kale waxaa lagu qiimeeyaa Jadwalka 111 walxaha. Tani macnaheedu waa iibsashada steroid adigoo adeegsanaya internetka ama wejiga ayaa sameynaya waxa ka soo horjeeda waxa sharcigu u baahan yahay. Dalalka kale waxay leeyihiin shuruuc adag oo adag sida Maraykanka oo kuwa kalena ay leeyihiin sharciyo yaryar. Si kastaba ha noqotee, waddamada intooda badani waxay niyad jabiyaan iibsashada internetka iyo iibinta Masteron propionate. kiiskan, waxay ka yartahay iibsashada khatarta ka iman karta maalgeliyayaasha steroid sida Steroid.com oo inta badan bixiya steroids sharci iyo tayo.
Dib u eegista macaamiisha Masteron
Chris Patel; Chris waa jimicsi oo ka soo jeeda Maraykanka oo ku tiirsanaa propionate Masteron inta lagu guda jiro wareegista wareegga waana taas waxa uu lahaa inuu sheego. "Waxaan horay u isticmaali jirey trenbolone acetate. Waxyeellada daawadu way igu badatay; jimicsi iyo finan badan iyo kuwo kale. Waa inaan joojiyaa qiyaasta. Tababareydu waxay igu taliyeen inaan u dhiibo Masteron kicinta maxkamad. Wuxuu isticmaalayay ilaa shan sano iyada oo aan wax cabasho ah. Inkasta oo uu la kulmay waxyaabo saameyn yar leh, wuxuu iigu ballan qaaday in qorshaha saxda ah, si fudud loo xakameeyay. Maaddaama aan ahay jir-dhiseyaal khibrad leh, waxaan u isticmaalaa qiyaasta horumarsan ee wareegyadayda. Ilaa hadda aad u wanaagsan; Marwalba waxaan haystaa tamar si aan kor ugu qaado culeyska. Hadda waxaan ka fiican yahay kuwii iga horeeyay. Waxaan xariiqayaa Masteron propionate leh barta tijaabada ee testosterone iyo nandrolone decanoate. Marka aan ku jiro wareegyada jarista, Masteron waa kan ugu fiican. Waxay runtii iga caawisaa inaan jaro dufanka jirka ee dheeraadka ah ee aad u adag in laga takhaluso. Xilliyadayda baaxaddayda, waxaan ku darayaa propionate Masteron kaas oo kor u qaada tamarta, waxaanan iga caawiyaa inaan sii wadno miisaanka loo baahan yahay xitaa markaad isticmaasho caraf badan. Jidhkaygu waa mid aad u nugul, waxaanan ku daraa culeyska si dhakhso ah, laakiin caawimaadda steroid, waa wanaagsan yahay. "Chris wuxuu kugula taliyay in steroidkaan loo isticmaalo lab iyo dheddigga jidhka.
Juma al Majid; Juma al-Majid waa jir-dhisiye iyo tababare ka socda Dubai wuxuu u isticmaalay propionate Masteron muddo siddeed sano ah. "Maaddadan steroid waxay iga dhigeysaa jarista iyo isbaarada wareegyada fudud. Had iyo jeer waxaan ku dhex jiraa toddobaadyadii la soo dhaafay ee waqtigii diyaarinta tartanka. Waxaan kula taliyay tiro ardayda ka mid ah in ay isticmaalaan, inta badana jawaab celintu way fiicantahay. In kastoo aan ku talineyno dadka isticmaala dufanka jidhka yar. Suurtagalnimadaydu waa caqabadayda ugu weyn. Helitaanka macmiil la isku halleyn karo waxay u muuqataa inay tahay hawl adag laakiin hadda waxaan ka soo qaatay hal shirkad aan ku kalsoonahay. Waxaan rajeynayaa inuu iibin doono jawiga dhabta ah mustaqbalka. "
waa maxay Masteron Enanthate (Drostanolone Enanthate)?
Masteron enanthate (472-61-1), oo sidoo kale loo yaqaan 'Drostanolone Enanthate' waa nooc ka mid ah Masteron oo asalkoodu aan fiicnayn. Si kastaba ha ahaatee, waa cadahay in steroid uu ahaa daroogada daroogada daroogada. Shaybaarada soo saara noocyo kale oo steroids ah sida Trenbolone Enanthate ayaa si fiican loo yaqaan '' Masteron '' oo leh taariikh qafiif ah. Laga yaabe, shaybaar hoose oo soo saarey oo u keenay suuq madow. Rikoodhadu waxay leeyihiin, iyo shaybaarka dhulka hoostiisa ah ee loo yaqaano "Dpharm" waxay soo saareen Masteran enanthate soo bandhigay suuqa, laakiin ma jirto caddayn ku filan oo lagu taageerayo macluumaadka. Qaabka asalka ah ee masteron, Masteron propionate wuxuu ka yimid shirkadaha daawada laakiin Masteron enanthate waxaa loo maleynayaa in lagu soo saaray suuq madow iyo sheyaalka dhulka hoostiisa.
Macluumaad aad u yar oo ku saabsan macaamiisha Masteron-ka ayaa laga soo qaadan karaa buugaagta anabolic steroid. Ku salaysan xaqiiqda ah in aan la soo saarin oo lagu tijaabiyay shaybaarka daawada ee cilmi-baarista ah, ma jirto xog caafimaad oo daaweyntan ah oo la heli karo.
Macmacaanka Masteron waa steroid anabolic oo la xidhiidha Masteron (Drostanolone Propionate). Masteron waxa loo soo jeediyay Syntex ee 1959. Waqtigaan, Masteron ayaa la joojiyay sidaas awgeed steroidkan kaliya ayaa laga heli karaa suuqa madow.
Daawadaas waxaa loo yaqaan 'staboid anabolic androgenic' tan iyo markii uu kiciyay korriinka unugyada. Sidoo kale, waxay xoojisaa horumarinta moodooyinka maskaxda, tusaale ahaan muruqyada iyo koritaanka timaha. Unugyadu waxay ku kobcinayaan dheef-shiid kiimikaadku waa anabolism halka testosterone iyo hormoonno kale oo lab ah oo loo yaqaan 'Androgens'.
Ugu horreyntii, '70s iyo' 80s, Materon waxaa loo maamuley bukaannada kansarka naasaha. Daaweeyn wanaagsan ayaa laga helay 1980s dabayaaqadii waxaana loo isticmaalaa in la yareeyo. Drostanolone waxaa ogolaaday FDA ee Maraykanka; Si kastaba ha ahaatee, farmashiistayaashu way diidan yihiin soo saarista.
Saameynta daaweynta ee Masteron wuxuu caan ku sameeyey. Hadda waxaa si weyn loo isticmaalaa jidh-dhisayaasha si loo yareeyo tartamada ka hor. Dawadani waxay si fiican u shaqaysaa maadaama ay ku saleysantahay, hoormoonka koritaanka iyo hormoonka, DHT (dihydrotestosterone) iyo steroid galmo. Hormoonka Drostanolone iyo hormoonada DHT hormoon iyo mid la mid ah, inkasta, waxoogaa isbeddel ah ayaa lagu sameeyaa Drostanolone si looga hortago burburka dheef-shiid kiimikaad kadib markii la maamulo. Sidoo kale isbeddelku wuxuu hagaajiyaa saameynaha anabolic. Kooxda methyl waxay ku darsameysaa booska 2 ee loogu talagalay natiijooyinka loogu talagalay.
Si cad, Dihydrototestosterone waa hoormoon iyo hormoon jinsi. DHT waxa lagu soo saaraa 5a-reductase enzyme ee prostate, testes, qanjirrada adrenal, iyo timaha timaha si ay u muujiyaan sifooyinka ragga. Maaddaama testosterone uu kordho meydka labka ah, sidaas oo kale DHT. Shan boqolkiiba oo ka mid ah testosterone kasta oo la soo saaray ayaa loo beddelaa Dihydrototestosterone. Waxyaabo fiican DHT ma badasho estrogen. Iyadoo lagu saleynayo xaqiiqda ah in Masteron uu ku salaysan yahay DHT, kordhinta DHT ma keenayso kororka estrogen. Hagaha Guud ee Dianabol ee Jidh-dhiska
Haleelka jinsiga ee ku xiran globulin-ku xiran sterids galmo samaynta firfircoonaanta. Testosterone xuduudda ma ahan mid faa'iido badan marka la barbar dhigo testosterone bilaash ah. Masteron wuxuu ka caawiyaa kordhinta tirada testosterone bilaashka ah adigoo si xoog leh ugu xiraya SHBG. Waxay u shaqaysaa marka ugu fiican marka xubin ka mid ah steroid stack ka badan marka keligaa.
Faa'iidooyinka heerarka testosterone sare waxaa ka mid ah;
Xanuun xoogan oo sareeya
Xaqiijinta guud ahaan wanaagga
Murqaha xoogan ayaa kor u kaca
Isticmaalayaasha DHT ma dareemaan waxyeelo khatar ah oo loo yaqaan 'estrogenic adverse', tusaale ahaan, naasaha aan caadiga ahayn ee naasaha. Saameyntan waxaa loo yaqaan 'gynecomastia' ama 'man boobs'. Daawadan ayaa si fiican loo yaqaan si loo yareeyo heerarka estrogen ee jirka. Sababtan awgeed, waxay si fiican u shaqeysay bukaanka qaba kansarka naasaha. Inta lagu jiro goynta wareegyada, steroidkani wuxuu adkeynayaa jirka wuxuuna siiyaa muuqaal adag oo adag. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka ugu fiican ayaa la gaari karaa marka la gooyo steroids kale. Isku dar ah daawadan oo leh xeryaha aromatic sida Dianabol iyo testosterone waxay la dagaallamaan miisaanka biyaha ee la xidhiidha estrogen si ay u dhamaystiraan dhammaadka fiican xilliyada wareegyada.
Xaqiiqada ah in steroids laga soocay DHT ma u badalayso Estrogen, ama halkii ma aromatize, waxay ka dhigtaa mid caadi ah dhexdhexaadiyeyaasha jirka. Waxtarrada estrogenic waxay khibrad u leedahay marka qofku isticmaalo Masteron Enanthate, oo la mid ah xeryaha kale ee laga soo qaatay DHT.
Masteron Enanthate waxaa kale oo loo yaqaan 'Drostanolone Enanthate'. Asal ahaan, daawadan ayaa la qoray laguna iibiyey iyadoo la isticmaalayo magaca caanka, Masterson. Sababahaan dartood, waxay caan ku noqotay jilayaasha jirka kuwaas oo loo adeegsaday wareeggooda. Asal ahaan, Drostanolone Enanthate waa dherer dherer ah halka Drostanolone Propionate uu leeyahay qashin gaaban. Farqiga u dhaxeeya labada ayaa la mid ah faraqa u dhexeeya testosterone Enanthate iyo Testosterone Propionate.
Nolosha nuska ah ee Msterone Enanthate waxaa la fidiyaa illaa toddoba ilaa toban maalmood iyada oo ay ugu wacan tahay aashitada Enanthate oo lagu daray kooxda 17-beta-hydroxyl. Taas bedelkeeda, Masteron Propionate kala bar noloshiisa waa inta u dhaxeysa afar ilaa shan maalmood taniyo aaladda loo yaqaan 'Propionate ester' oo lagu daro daroogada.
Sidee falaa Macmacaanka Masteron wuxuu u shaqeeyaa?
Masteron Enanthate, waa nooc ka mid ah Masteron, waa qaali dheer. Waxay u shaqeysaa muddo dheer iyadoo ugu wacan loo isticmaalo dhererka wareegga wareegga, ugu badnaan 10 ilaa 12 toddobaad. Jimicsiga oo doonaya in la gooyo kahor tartanka ka hor ayaa ka faa'iideysan doona marka ay ka sameeyaan qaybta daroogada ee wareegtadooda. Masteron Enanthate, intay le'eg tahay steroid anabolic, ma ku darsamayso awoodda anabolic. Dhab ahaan, mararka qaarkood, waxay u muuqataa mid daciif ah Testosterone, awood xoog leh. Heerka anabolic anabolic and rating testosterone anabolic waa 63-130 iyo 100 siday u kala horreeyaan. Tani waxay macnaheedu tahay in heerka ugu hooseeya, Masteron waa 30% daciif ah marka loo eego testosterone ama wuxuu noqon karaa 30 boqolkiiba xooggan marka ugu muhiimsan ee ku saabsan awoodda anabolic. halka hal qof uu ku raaxaysto natiijooyinka ka soo baxa isticmaalka Masteron Enanthate, waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yaryahay ama eber qof kale. Daroogadaasi waxay soo saartaa natiijooyinka ugu fiican marka la raaciyo noocyo kala duwan oo ah steroids anabolic. Waxay noqon kartaa guuldareyn marka loo isticmaalo kali ahaan gaar ahaan dadka isticmaala steroids anabolic.
Qiyaasta 400mg ee Masteron Enanthate toddobaad kasta waa ku filan bilawga, sidoo kale waa la ilaalin karaa. In kastoo, qiyaasta qiyaasta waxay ku xiran tahay waxa uu isticmaluhu doonayo inuu gaaro ka dib wareegga ama waxa la doonayo inuu ka helo daawada lafteeda. sida hore loo soo sheegay, qiyaasta bilowga ah caadi ahaan 400mg asbuucii, hase yeeshee, kuwa jidhka sameeya ee isticmaala kahor tartanka waxay doorbidaan isticmaalka 200mg isbuuciiba toddobaadle ah oo la socda xeryaha kale. Isticmaalayaasha leh boqolkiiba dufanka jirka, jidhkoodu waxay la kulmaan waxtarrada dheelitirka ee muhiimka ah marka ay isticmaalaan 200mg asbuuc kasta.
Qiyaasta 600mg ama in ka badan toddobaadkii 800mg ma aha mid faa'iido leh inta badan inay fekeraan. Dhismayaasha jidhka ee doonaya in ay ku yeeshaan awood iyo baaxad dheeraad ah ayaa maamula qiyaasta sare ee Masteron Enanthate, laakiin natiijooyinka ayaa noqon kara kuwo aan muhiim ahayn. Iyada oo la tixgelinayo awooda iyo qiimaha daroogada, dadaalku waa mid aan haboonayn. Intaa waxa dheer, Masteron waa hindhisle muusiko oo aan kor u qaadin xajmiga iyo koritaanka xoogga.
Isticmaalka Masteron Enanthate oo leh steroids kale waxaa lagu talinayaa. Xeryaha kale waa inay u ekaadaan Masteron oo loo isticmaalo ujeeddo isku mid ah ama halkii loogu talagalay helitaanka himilooyin isku mid ah. Caadiyan, testosterone waa in lala isticmaalo steroids anabolic. Isku-darka Isku-imaadiyaha Enanthate iyo Masteron Enanthate waa xulasho aad u fiican. Sababta jirta, xayiraad ka mid ah labada istiraatijiyadood ee steroids oo ku salaysan steroid-ka keliya ayaa ka dhigaya wakhtiga iyo duritaanka si sahlan oo waxtar badan. Haddii loo baahdo xarun saddexaad loo baahan yahay, steroid afka ah ee anabolic ayaa la isticmaali karaa hadba sida ay u eg tahay marka la eego natiijooyinka loogu talagalay. Si la mid ah, seddexaad cirbadeynta ayaa sameyn doonta, tusaale ahaan, Trenbolone Enanthate. Nooc ka mid ah Testosterone, Trenbolone iyo Drostanolone Enanthate waxaa loo yaqaana sida tartanka hargabka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo qalabka jirka. Noocyada kala-guurka ah ayaa si cad loo xushay sababtoo ah is-waafajintoodii ugu wacan. Sidoo kale, Trenbolone wuxuu hagaajiyaa saameynta heesaha ee Masteron ee jirka. Intaa waxaa dheer, Masteron iyo Trenbolone ma u badalaan Estrogen marka la maamulo. Shakhsiyaadka jirkooda ayaa sidaas darteed, u beddeli kara wax wanaagsan oo qiyaasaya qiyaasta mudo macquul ah. Waxaa lagugula talinayaa inaadan isticmaalin Masteron Enanthate xoogga iyo xayiraadda wareegga wareegga. Taa baddalkeeda, way ka jaban tahay isticmaalka mukhaadaraadka kale ee aromatase daawada.
Isticmaalayaasha yaryar waxay ka faa'iidaystaan ​​wax ka badan Masteron Enanthate inta lagu jiro jarista wareegyada. sida caadiga ah, kuwa jidhka sameeya ayaa isticmaala daroogada marxaladda ugu dambeeya ee diyaarinta tartanka; ka dib markii ay lumiyaan dufanka jirkooda. Daroogadu waxay iga caawisaa inaan ka takhaluso dufanka adkaada ee haray. Natiijooyinka ka dambeeya qiyaasta ayaa si uun u dareemi kara shakhsiyaadka aan ku tiirsanayn. Sidoo kale, daawadani waxay ku habboon tahay kuwa jirka ah ee xirfadlayaasha ah.
Dad badan oo shakhsiyaadka ah ayaa isticmaala steroid tan ugu faa'iidada yar ee cajiibka ah. Si yaab leh, waxay sidoo kale xoojisaa awoodda shaqsiga. Marka ay shakhsiyaadka isku dayayaan in ay yareeyaan wareegyada wareegyada, waxay ku dhammeeyaan xoogaa xoog ah. Masteron Enanthate wuxuu door muhiim ah ka qaataa ka hortagga tani inay khasaariso iyada oo kor u qaadaysa adkeysiga murqaha, awoodda guud iyo wakhtiyada bogsashada.
Masteron Enanthate waa adag tahay in la helo loona xakameeyo marka la barbardhigo Masteron Propionate. Sababahan dartood, dadka isticmaala steroid marar dhif ah ayay isticmaalaan daroogadaas, kuwa jidhka ku jira.
Masteron wuxuu abuuraa wareegyo
Masteron-ku wareegsan wareegyada waa inuu ku jiraa steroid dibedda ah, ma aha qasab maaha Masteron. Tusaale ahaan, waxay si fiican u isku dhafan tahay tijaabo. Waxaad isticmaali kartaa nooc kasta oo ka mid ah testosterone ilaa iyo inta uu bixinayo qiyaasta dheeraadka ah ee loo baahan yahay hormoonka galmada.
Kordhinta testosterone dhammaan wareegyada waa qasab. Masteron si xun ayuu u saameeyaa soosaarka tijaabada dabiiciga ah sidaas daraadeed tirada yar ee loo baahan yahay jidhku waa la dhimay. Sababtaa awgeed, testosterone dibedda ah waa in la siiyaa nidaamka isticmaalka si caadi ah u shaqeeyaan. Isticmaalayaasha kuwaas oo iska dhejiyey iskudhacyada testosterone ee xakameynta ayaa ka soo gaartay natiijada tirooyinka testosterone hoose ee jirka. Si kastaba ha noqotee, shakhsiyaadka ku-meel-gaadhka ah ee yaraanta testosterone waxaa laga yaabaa inaysan waxtar badan ka helin koritaanka dibedda ee hormoonkan jinsiga ah. Cilladaha ugu yar waxaa lagu maamulaa marka la isticmaalo majaajilada Masteron inta lagu jiro wareegyada wareegyada. Steroidkani wuxuu leeyahay nolol badh ka dheer sidaas oo kalana u soconaya nidaamka muddo dheer.
A Masteron enanthate wareegga bilawga wareega waxaa ku jiri kara qiyaasta toddobaad ee 400mg Masteron enanthate, iyo 300mg ilaa 500mg testosterone enanthate. Qadarka testosterone ee loo isticmaalo wuxuu ku xiran yahay qofku doorbidiisa inta uu le'eg yahay inta u dhaxeysa qaybta la bixinayo. Qalabka aromatase looma baahna wareeggaan maaddaama Masteron laftiisa ay tahay ka hortag.
Isticmaalidda Masteron wuxuu uumi saarayaa xeryaha xooggan ee aromatization ee wareegga wareegga wuxuu u baahan yahay hordhaca ah aromatide xoogan ee arooriyaha, tusaale ahaan, Arimidex, Letrozole iyo Aromasin. ginecomatia waa caan ka mid ah dadka isticmaala kuwa aan soo saarin daawada xakameynaya xaraarad leh steroids badan oo aromatic.
Masteron Enanthate waxyeelo dhinaca
Dhibaatoyinka 'Estrogenic' ayaa ah kuwo khibrad leh markay shakhsiyaadka isticmaalaan steroids. Tusaale ahaan, haynta biyaha ama ginecomastia, murqaha, dhiig karka iyo finanka. Si kastaba ha ahaatee, Masteron Enanthate waa mid aad u fiican tan iyo markii uu soo bandhigo saameynta anti-estrogenic. Macnaha, shakhsiyaadka isticmaalaya steroidkan khasab kuma aha inay isticmaalaan estrogens-ka. Markaad isticmaasho xayawaanka kale ee weheliya Masteron Enanthate, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho estrogens anti-estrogens.
Inta badan Masterson Enanthate saameynaha soo-saarku waxay la xiriiraan asrogens. Androgens waxay kordhisaa saamaynta maskaxaha sida finanka, timaha lumida ragga oo leh qaabka xayawaanka iyo kororka xad dhaafka timaha lugaha, laabta iyo gacanta. In kastoo, saameynadaani ma aha mid aad u kacsan oo badanaaba waxay saameeyaan labka iyo taariikhda xaaladahaas.
Dumarka isticmaala Masteron Enanthate waxaa laga yaabaa inay yeeshaan sifooyin qaali ah marka qiyaasta qiyaasta. In kastoo, sifooyinkaas waa in la baxaa marka ay joojiyaan isticmaalka daroogada, laakiin mararka qaarkood isbeddellada ayaa noqonaaya kuwo aan dib loo celin karin. Isbeddelkaan waxaa loo gudbiyaa fayruska oo wuxuu ku tilmaamayaa cod dheer, kintirka ballaaran iyo koritaanka timaha jirka ee haweenka. Horumarka saameyntani waa mid aad ugu tiirsan hidaha, sidaas darteed way kala duwan tahay shakhsiyaadka. Dumarka waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan daawada Drostanolone halkii ay ka ahayd Masteron Enanthate maadaama ay jidhka ku nadiifiso muddo gaaban.
Drostanolone Enanthate saameeya heerarka kolestaroolka. Steroidkani wuxuu kordhiyaa heerarka LDL iyadoo la kordhinayo heerarka HDL ee dhiigga. Saamaynta HDL waxay ku saleysantahay marka la barbardhigo saameynta LDL taas oo kiisaska ugu badan ay noqon karto mid aan qiimo lahayn. Marka laga hortago dhibaatooyinkeeda, dadka isticmaala waa inay si joogta ah ugu lug yeeshaan dhaqdhaqaaqa wadnaha sida dabaasha, orodka, dhirta iyo baaskiilka. Cadaadiska dhiigga oo sareeya ayaa sidoo kale laga yaabaa inay noqoto riwaayad user. Shakhsiyaadka leh heerarka kolestaroolka sare ayaa doorbidaya in aan la saarin steroidkan.
Masteron Enanthate isticmaalayaasha male waxay u baahan doonaan testosterone exogenous tan iyo steroid si xun u saameeyaa soo saarista testosterone dabiiciga ah. Nidaamkani waa qasab. Isticmaalayaasha ayaa maraya daaweynta beddelka tijaabada ee testosterone si looga hortago dhibaatada. Waxay ku lug leedahay qaadashada 100mg qiyaasta testosterone. Markuu qofku isticmaalo heerarka Masteron Enanthate heerarka testosterone dabiiciga ah waa in la soo saaraa heerarka caadiga ah dhawr bilood gudahood. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in la mariyo Post Cycle Therapy (PCT) kaas oo gacan ka geysanaya dib u soo kabashada nidaamka iyo hagaajinta wax soo saarka testosterone dabiiciga ah. Dib u soo celinta heerarka caadiga ah ee testosterone waxay qaadataa muddo dheer shaqsiyaadka diiwaangashan taariikhda shuruudaha testosterone ama heerarka testosterone oo hooseeya. Si ka wanaagsan, shakhsiyaadkaas waxaa lagula talinayaa in ay ka fogaadaan qiyaasta steroid ah oo dhan.
Si ka duwan noocyada kale ee anabolic anabolic, Masteran enanthate ma keenayso waxyeelo gaarta beerka ama faragalineysa shaqadeeda caadiga ah. Tani waa sababta oo ah waxay ka madax bannaantahay walaxaha asaliga ah ee anabolic androgenic.
Soo iibso Masteron Enanthate online
Sannadihii ugu danbeeyay, wax soo saarka Masteron Enanthate ayaa hoos u dhacay. Sidii hore loo sheegay, daawadani waxa kaliya oo laga heli karaa suuqa madow. Waa qaali aad u qaali ah oo ka badan Macaamiisha Masteron.
Ka hor intaadan iibsan Masteron Enanthate iyada oo loo marayo internetka, iibsadayaashu waa inay sameeyaan jeegareynta asalka ah si ay uga fogaadaan been-abuurka. Haddii aanad taxaddarin, waxaa dhici karta in aad soo geshid foomka been abuurka ah ee steroid ama xitaa hal dhibic oo dhan.
Dalka Mareykanka, Masteron Ethanate waa sharci-darro sidaad wax u iibsan karto wajiga ama waji-beelka waa sharci-darro. Waa walax la kontarooli karo, Jadwalka 111, oo kaliya ayaa lagu iibsan karaa oo kaliya rukunka. Nasiib darro, farmashiistayaashu ma iibinayaan iyada oo aan macquul aheyn in ay iibsadaan sharci ahaan.
Allan Walker; Allan Walker waa jimicsiga jidhka iyo macalinka jimicsiga Chicago. Tani waa waxa uu lahaa inuu ka sheego steroid. "Masteron Enanthate hadda waa steroid ugu dambeeyay ee aan jeclaa. Waxaan isku dayay Tren.a iyo horeyba, laakiin waxaan ku dhamaanayaa in aan ku faafo dhamaantiis -waxaanan jeclaan laheyn isbeddel xun ee jirkeyga. Hadda, mar kasta oo aan rabo inaan gooyo, waxaan isticmaali doonaa Masteron. Qadarkayga waxaa ka mid ah;
Imtixaanka 200mgs / EOD
Winny 50mgs / maalin
Waxaan ku daray miisaanka qaar ka mid ah qeybtii kowaad ee habka wax lagu soo dhejiyo; laga bilaabo 190lbs illaa 220. Aniga, taasi ma ahan wax badan oo aan ahaa kaliya waxa aan u baahday si aan u murugo muruqyahayga. Waxaan billaabay isticmaalka Masteron qeybtii dambe ee qashinka. Saddex isbuuc ka dib ama markaa waxaan ogaaday in aan lumiyay dufanka jirka iyada oo aan laga helin caawimaad isbeddel cunto ama kaadi. Waxaan daadiyey dufan weyn oo dufan ah markii la soo dhaafay. Sidaa darteed waxaan u maleeyay naftayda, sababta aan u cunin carafal iyo shaqaale ku dari miisaan iyo arko waxa dhacaya. Si aan la yaabin, miisaan kuma ekeyn, mana aanan lumin labadaba. Waxaan maalin walba ku shaqeynayay qiyaastii 500g. Jidhkaygu waa mid aad u nugul carafo, dhab ahaantii, ma ahan Masteron, waxaan ku dari lahaa dufan leh wax ka sareeya laba boqol oo garaam maalintii. Marwalba waan xasillaa, cadaadiska dhiiggeygu waa caadi, waxaanan ku raaxeystaa tababarka. Macallimiin, Masteron ayaa ka caawiyay baruurta luminta, fadhiyada tababarka weyn, iyo murqaha muruqyada. Dhibaatada kaliya ee aan la kulmay waa jilicsanaan laakiin wax badan maaha marka la barbardhigo marka aan isticmaalo Tren. a. Caadi ahaan, dadka intooda badani waxay isticmaali lahaayeen Mast prop ama Masteron Enanthate bulking sidoo kale waa heshiis weyn.
Butros; Peter, jir-dhiseyaal, wuxuu ka soo jeedaa Paris. "Qorshaheyga qiyaasta ayaa ahaa 50mgMasteron Propionate maalin kasta, 200mg Mast Enanthate toddobaadle iyo testosterone 100mg ah toddobaadle ah inta lagu jiro wareegga jarista. Waxaan helay miisaan yar yar toddobaadyadii u horeeyay ee aan ku dhisto murqaha caatada ah, laakiin waxaan mar dambe ka daadagay meel aan ku socdo. Iyada oo xarkan, waxaan buuxin aan la dabooli karin. Waxyaabaha wanaagsan ee leh miyir-beelka Masteron waa inaan kaliya u baahanahay inaan isku duro hal mar toddobaadkii. Waxay igu sameeyeen caddaalad illaa inta laga goynayo welwelka. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waxaan dareemayaa in aysan ahayn steroid ugu fiican laakiin waxaan jeclahay habka ay u xoojiso xooggayga. Waxaan u isticmaali jirtey marxaladdii ugu dambeysay ee diyaarinta tartanka si aan u daadinno dufanka jirka ee soo hartay si aanan u muuqan mid aad u weyn. Anigu waxaan ku fekerayaa inaan ku daro cunto aan xabbad lahayn oo aan si adag u tababaro.
Masteron enanthate qiyaasta - Qiyaasta Masteron propionate
Masteron propionate variion waa qaabka Masteron asalka ah ee loo ogolaaday isticmaalka caafimaadka. Waxay u dhacdaa inay tahay midka ugu badan oo loo isticmaalo dadka isticmaala steroid anabolic. Iskuduwaha Enanthate aan la soo saarin goobta caafimaadka laakiin sidaas darteed sheyga dhulka hoostiisa ama kuwa kale ee sharci-darrada ah. Masteron propionate wuxuu leeyahay waxyaabo nus ah oo ku saabsan qiyaastii 2.5 halka Masteron Enanthate uu leeyahay qaab nolol oo qiyaastii ah 10 maalmood.
Qiyaasta Masteron Propionate waa in la maamulaa maalin kasta si loo xasiliyo hormoonka; doorbidayo 50 illaa 150mg. Dhanka kale, Masteron Enanthate waa in la maamulaa mar ama laba jeer toddobaadkii. Tusaale ahaan, haddii qiyaasta daawadu tahay 400mg, waa in la xakameeyo 200mg Isniinta iyo inta ka hartay Khamiista. Toddobaadkiiba laba jeer ayaa aad u wanaagsan in la ilaaliyo heerarka dhiigga ee joogtada ah.
Farqiga qiyaasta qiyaasta waxaa sabab u ah xaqiiqada ah in Masteron Propionate uu dhaqso u dhaqmo Enanthate laakiin jirka ayaa si dhakhso ah u nadiifiya. Taas bedelkeeda, Masteron Enanthate waxay shaqeyneysaa gaabis laakiin waxay joogtaa muddo dheer oo jirka ah. Labada nooc ee Masteron labadaba waa la og yahay inay daciif yihiin sidaas darteed waa in lala wadaago xayndaabka kale ee la midka ah.
Masteron wuxuu u baahan yahay istiraatiijiyad ah - Masteron propionate isdabajoog
Ma jiro farqi u dhexeeya xeryahooda si ay ula socdaan mid ka mid ah labada nooc ee Masteron. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la fahmo in steroids aad doorato inaad ku darto xargaha go'aamiyo tayada. Tusaale ahaan, isku-dar ah Masteron enanthate iyo propionate proposterate ayaa natiijooyin wanaagsan ku siin doona dhamaadka wareegga. Waxyaabaha muhiimka ah ee la tixgelinayo marka xoqidda ay tahay in la doorto xeryahooda oo la mid ah Masteron iyo kuwa bixin kara natiijooyin isku mid ah.
Sidoo kale, qaar ka mid ah jir-dhiseyaasha ayaa laga yaabaa inay doortaan inay isku darsadaan Masteron propionate labadaba Masteran enanthate, kuwaas oo aan wax dhibaato ah. Isticmaalayaashu waa inay hubiyaan in ay ku jiraan aromatised inhibitor haddii ay ku dhejiyaan mid ka mid ah Masteron leh xeryahooda aromatizing badan.
Testosterone waa in lagu daraa xargo kasta oo Masteron ah si loogu daboolo tirada tirooyinka testosterone ee jidhka oo keeney hirgelinta Masteron ee jirka.
Masteron wuxu leeyahay saamiga orrogenic / anabolic ee 25; 62 halka testosterone ay muujinayso 100; 100 marka la barbardhigo labada qalab. Tani, si kastaba ha ahaatee, waa inaan macnaheedu ahayn in masteron daciif yahay. Marka la xakameynayo xayndaabyada kale, waxay noqoneysaa mid xoog badan, laakiin markii kali ahaan loo isticmaalo waxay noqoneysaa mid wax ku ool ah.
Masteron propionate, oo ah aaladda gaaban, dadka isticmaala waxa ay isku daraan wax kale oo gaaban (s) sida gaaban barta tijaabada ee testosterone, phenylpropionate nandrolone, Iyo trenbolone acetate. Istaraatajiyadu waxay u oggolaanaysaa in aabayaashu ay ku sii jiri karaan iyaga. Dhinaca kale, macaamiisha Masteron waa dherer dherer ah, waxaa lagu xardhay astaanta kale ee la midka ah sida trenbolone enanthate, Cypionate testosterone ama baaritaanada testosterone iyo nandrolone decanoate.
Masteron propionate jarida - Masteron propionate jarista
Labada nooc ee Masteron waa wax aad u badan inta lagu jiro jarista wareegyada. Ma jiraan wax farqi ah oo ku saabsan waxa ay bixin karaan. Shakhsiyaadka qaarkood waxay door bidi karaan inay isticmaalaan propionate Masteron maaddaama ay waqtiga soo kabashada uu gaaban yahay sidaas darteed saameynada ay keento isticmaalka waxay u baaba'aysaa sidoo kale. Masteron enanthate, dhanka kale, wuxuu leeyahay waqti soo kabasho waqti dheer.
Labada Masteron propionate iyo enanthate ayaa si fiican loo isticmaalaa si loo yareeyo dhamaadka wareegga diyaargarowga tartanka. Marka marxaladdan, isticmaaluhu wuxuu ku tiirsan yahay sidaas darteed saameynta steroidku waxay noqdaan kuwo muuqda. Caadi ahaan, Masteron wuxuu iska saari doonaa dufanka jidhka madaxiisa si uu u siiyo jirka jirka oo adag. Waa mid aad muhiim u ah in dufanka jirka laga saaro in ka yar 10% ka hor inta aan loo isticmaalin Masteron.
Labada maskaxeed ee Mastrone iyo Masteron enanthate maahan astamaha ugu fiican ee lagu garto. Si kastaba ha ahaatee, waxay kor u qaadaan awoodda iyo dhisidda muruqyada caatada ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ujeedadu tahay isticmaalaha isticmaalkiisu yahay in lagu kordhiyo muruqyada, ka dibna waxaa jira steroids kale oo ay ku habboon tahay habka ugu fiican.
Masteron propionate iyo enanthate ayaa lagu dari karaa qorshe baaskiil ah si loo maareeyo dufanka jidhka oo dillaacaya xilliga xayiraadda. Waqtigan, isticmaaluhu ma rabo inuu ku daro miisaan xad dhaaf ah. Si kastaba ha ahaatee, tani waa inaysan noqon cudurdaar ah oo ay ka mid yihiin, sayniska ee qorshaha xajmiga. Guud ahaan, sababta ugu weyn ee masteronku ugu jiro wareegga xayiraadda waa inuu kor u kiciyo tamarta oo uu ka caawiyo isticmaalaha isticmaalka miisaanka jirka ee loo baahan yahay xitaa marka uu ku jiro cunto karbeed oo sarreeya.
Saamaynta Masteron-ga ee saamaynta leh - saamaynta saamaynta Masteron
Masteron propionate wuxuu ku badan yahay dadka isticmaala marka la barbardhigo propionate Masteron. Dhibaatooyinka, si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin farqi yar. Labada rag iyo dumarba waxay isticmaali karaan Masteron propionate ah si loo yareeyo iyo xajinta wareegyada. Dhibaatooyinka dhinaca, xaaladdan, ayaa lagu xakameyn karaa qorshe wanaagsan iyo qiyaasta saxda ah. Dhanka kale, haweenku waxa ay ka niyad jabayaan inay isticmaalaan Magacooda Masteron-ka sababtoo ah waxay leedahay nolol badh aad u dheer waxayna qaadataa waqti aad u badan si loo nadiifiyo nidaamka. Dumarka isticmaala gaar ahaan qiyaaso badan ayaa laga yaabaa in ay dareemaan waxyeellooyinka soo noqnoqoshada.
Masteron propionate wuxuu u shaqeeyaa si dhakhso leh inta ugu weyn ee loo yaqaan 'Masteron Enanthate' waa mid gaabis ah. Abuuruhu wuxuu ku xiran yahay Magaca Masteron-ka ee ka dhigaya inuu hoos u dhaco, laakiin wuxuu sii daayaa hormoonnada muddo dheer. Tani waa sababta ugu weyn ee loo maleeynaayo in la isku duro maalin kasta iyada oo la nuugo isugeyn labo jeer ama hal mar toddobaadkii.
Labada nooc ee Masteron ma badasho estrogen. Waxay sidoo kale ka hortagayaan beddelka testosterone in estrogen. Sidaa daraadeed, daryeel caafimaad iyo caadi caadi ah oo ah tijaabin bilaash ah ayaa la ilaalinayaa.
Saameynta isticmaalka Masteron propionate ama Masteron enanthate waxay u muuqaneysaa mudo gaaban oo ah isticmaalka gaar ahaan ciyaartoyda xirfadlayaasha ah iyo kuwa farsamada. Waxay kor u qaadaysaa tamarta waxayna ka caawisaa inay abuuraan murqo saafi ah iyagoo weli sii wadaya miisaanka loo baahan yahay.
Masteron wuxuu u egyahay dib u eegis lagu eegayo
Isticmaalayaal badan oo steroid ah maaha inay ku daraan Masteron si aad ah marka loo barbar dhigo steroids kale maaddaama intooda badani ay ka walwalsan yihiin ku darista cabbirka cayriinka. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay fahmi karaan wax badan oo faa'iido ah Masteron ayaa bixisa, dibad-bax ka baxsan, markaa steroid this aad u sareeya.
Masteron Propionate badanaa ka mid ah dadka isticmaala marka loo eego Masteron Enanthate. Tani waa sababta oo ah si fudud ayaa loo xakameynayaa oo xirmooyinka tayada ee steroid ah ayaa si fudud loo heli karaa suuqa. Sidoo kale, isticmaalayaasha haweenka waxay dooran karaan inay isticmaalaan Masteron Propionate-ka markii ay jidhka ku nadiifiso muddo gaaban.
Masteron propionate ee iibinta vs Masteron waxeey u tahay iibka
Masteron propionate waa qaabka asalka ah ee Masteron. Sababtan awgeed, waxaa si fiican u yaqaan dad badan oo isticmaala marka la barbardhigo Magaca Masteran. Si la mid ah, steroidkaan waa mid sharci ah oo ku yaala Mareykanka laakiin waa in la qoro. Dhinaca kale, asalka majaladda Masteran waa mid si fiican loo yaqaan waana sharci darro dalal badan. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in la helo a Masteron enanthate / wax soo saarka tafaariiqda ee suuqa madow.
Iibsashada Masteron propionate waa mid aad uga sahlan iibsashada kala duwanaanta. Si kastaba ha ahaatee, labaduba waxay helayaan suuq madow oo tiro badan. Dib-u-dhaca ugu wayn wuxuu helayaa steroid nadiif ah oo asal ah. Waxaad la kulmi kartaa a Masteron enanthate / bixiyeyaasha bixiya oo iibiya isteerin ama xitaa steroid aan sax ahayn. Dalalka qaar, sidoo kale, iibsashada Masteron wajiga wajiga ama internetka waa sharci darro sidaa daraadeed dadka isticmaala waa in ay aad u taxaddaraan iyagoo iibsanaya steroid.
Hartgens, F., Cheriex, EC, & Kuipers, H. (2003). Qiyaasta echocardiographic ee imtixaanka ah ee steroids ee anrogenic-anabolic waxay saameyn ku yeelataa qaabka wadnaha iyo ka shaqeynta xoogga cayaaraha. Wargeyska caalamiga ah ee daawada isboortiga, 24 (05), 344-351.
Evans, NA (1997). Jimicsiga iyo tufaaxa: muuqaal ka mid ah dadka isticmaala steroid 100. Wargeyska Ingiriiska ee daawada isboortiga, 31 (1), 54-58.
Wood, RI (2004). Dib-u-dhiska qaybaha of androgens. Physiology iyo dhaqanka, 83 (2), 279-289.
Friedl, KE, Hannan Jr, CJ, Jones, RE, & Plymate, SR (1990). Kolestaroolka lipoprotein ee laf-dhabarta ah looma yareeyo haddii xajiin iyo xajiin la kariyo. Metabolism, 39 (1), 69-74.
Schänzer, W. (1996). Metabolism of steroids anabolic antholic. Kimistariikada, 42 (7), 1001-1020.